Lionel Messi ayaa ku biiray tartanka kabaha
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa xalay kooxdiisa ku hogaamiyay guul 3/1 ah oo ay ka gaadhay kooxda Athletic Bilbao isaga oo ku soo biiray tartanka kabta dahabka ee La Liga.
Isaga oo leh laba gool ciyaartii xalay, Lionel Messi ayaa dhaafay xiddigo hore oo hogaaminaya koobka Pichichi ee horyaalka La Liga.
Toddobada jeer ee Pichichi Trophy waxaa ku guuleystay Lionel Messi oo uu doonayo inuu ku guuleysto sannadkan, laga yaabee inuu xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay ku qaatay Barcelona, ​​taasoo noqon karta tii sideedaad.
Lionel Messi ayaa dhaliyay sagaal gool labadii kulan ee ugu dambeysay ee La Liga, una dhigma toban Iago Aspas, Luis Suarez iyo Gerard Moreno.
Xiddiga reer Argentina ayaa ku dhibtooday intii lagu jiray qeybtii hore ee xilli ciyaareedka, waxaana uu dhaliyay kaliya hal gool lixdii kulan ee ugu horeysay, laakiin ka dib wuu soo toosay wuxuuna dhaliyay afar gool afartii kulan ee ugu dambeysay. kulankii Huesca kaliya ma uusan helin shabaqa.
33 jirkaan ayaa qaab ciyaareed wanaagsan kujiray kulamadii ugu dambeeyay, waxaana sifiican loola bar bar dhigay Pedri, Goolkii ugu horeeyay ee uu Messi dhaliyay fiidnimadana cunugga ayuu cagaha wax kabaray.
Liverpool ayaa dooneysa inay qorto Sergio